Sifu ikozvino zvakare mukutengesa kwekutengesa: Yakakura yekuvandudza - mutambo poindi - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Kung Fu Action Game Sifu Inoburitsa Nyowani Yezve Yekuwedzeredza uye Retail Shanduro Yakaburitswa Kukadzi 8, 2022, miriyoni iri kutengesa, inoshoropodzwa kung fu yakarova Sifu yadzoka nezvitsva zvemukati! Muparidzi Sloclap (Absolver) zita rekutengesa zvakanyanya rakagamuchira yekutanga zvinyorwa zvePlayStation nePC nhasi, vachipemberera kuburitswa kwemutambo pasi rese.
Iyo Sifu Spring Kuwedzeredza 2022 inounza hutsva hutsva hwakadai sekuoma nhanho, yepamberi yekudzidzira modhi iyo inokutendera iwe kudzidzisa kupikisa chero anopikisa (kusanganisira mabhosi emusango!), Chipfeko chitsva chechimiro chechimiro chine zvipfeko zvitatu zvitsva, uye zvimwe zvakawanda zvemhando. hupenyu maficha -Zvidzoreso uye shanduko kune mushandisi interface uye zvinodzora.
Sifu yave kuwanikwa zvakare muzvitoro zvezvidhinha nedhaka
Yakaburitswa muna Kukadzi, Sifu yakarumbidzwa seimwe yekutanga kurova kukuru kwa2022. Yakatengesa makopi anodarika miriyoni mumavhiki matatu ekutanga ekuburitswa kwayo - uye yakatonzi GOTY mukwikwidzi nevashori vepasirese. Mugadziri uye muparidzi Sloclap akasimbisa svondo rapfuura kuti studio yatove mukati mekugadzira zvemahara zvemukati zvemutambo kwegore (link). Sifu inomisikidzwa ichipesana neyakadzama yeguta rekunyepedzera reChinese uko vatambi vanozoburitsa chakavanzika chekare uye kuyedza hunyanzvi hwavo kusvika kumagumo munhevedzano yekunetsana kwakaoma. Kuti vakunde zvipingamupinyi zvinoita sezvisingakundiki, varwi vanofanira kuvimba nekugona kung fu uye pendant yemashiripiti kuvamutsa parufu.
Nekudaro, mutengo wemashiripiti wakakwira, uchichembera zvakanyanya nekumutsiridza kwega kwega: nguva ndiyo mutengo wekutsiva.
Kurudziro huru yaSifu inobva kumabhaisikopo ekung fu emhando yepamusoro, aine vamwe vanobva kuchikwata chebudiriro chaSloclap Pak Mei vakadzidzira kung fu nemamwe akasiyana martial arts. Munguva yekuvandudzwa kwemutambo, chikwata chakashanda pamwe chete neboka reKowloon Nights muBeijing neHong Kong kuronga ongororo yetsika kuti ive nechokwadi chokuti mutambo unobata tsika yeChinese kung fu neruremekedzo sezvainogona. Vanachipangamazano vakati wandei kubva kumakambani emutambo wemavhidhiyo eChinese vakakokwa kuti vape uye vape mhinduro, zvichikonzera shanduko dzakawanda kumutambo, kubva pakuonekwa kwemutambi mukuru kusvika kune zvakatipoteredza.
Vatambi vanogona ikozvino kusarudza danho rekuoma muSifu, kusanganisira sarudzo yekuita kuti mutambo uome. Kune matatu marongero: Mudzidzi, Mudzidzi uye Mudzidzisi. Izvi zvinotarisa kusimba kwevanopikisa, maitiro eAI uye zvishoma nezvishoma kana nekukurumidza sei hunhu hwako zera mumutambo, nepakati pekunetsekana nhanho inoenderana nekuoma kwekutanga kuseta kubva mukuburitswa.
Zvipfeko zviviri zvitsva zvisingavhurike zvakare zviri kuunzwa nekuvandudzwa kwanhasi, nezvakawanda zvakarongwa kune ramangwana rekuvandudza. Vatambi vachakwanisa kusarudza zvipfeko zvavo muWuguan. Avo varidzi veDeluxe Edition vanogona kusarudza chimwe chipfeko, uye kune avo vari kutsvaga kukwenenzvera hunyanzvi hwavo, nzira nyowani yekudzidzira inosvika nhasi, ichivabvumira kudzidzira kurwisa chero muvengi archetype kana mukuru wavakakunda munhoroondo. Iko kunotova nemukana wekukwikwidza nevakawanda vanopikisa panguva imwe chete.
Iyo yakasviba modhi yemamenu emu-mutambo, mbeva iri nani uye tsigiro yekhibhodi, zvigadziriso zveodhiyo, uye yakagadziridzwa HUD kuverenga zvinongori zvishoma zvekuwedzera kuvandudzwa mune yanhasi.
Iyo inogadziridza zvakare inopemberera kutangwa kweSifu sezvo mutambo uchirova zvitoro zvezvitoro pasi rose nhasi, uko vadzidzi vane nyota yekutsiva vanogona ikozvino kupedza nyota yavo neshanduro yemuviri yeSifu muStandard uye Vengeance -Edition kubva kune yekugovera shamwari Microids. The Vengeance Edition inosanganisira bhuku remifananidzo rine mapeji makumi mana nemasere, iyo yakazara dhijitari inonzwika yakanyorwa naHowie Lee, uye matatu akanaka lithographs, ese akaiswa mubhuku resimbi.
Turera pfupi, yakaburitswa zvakare, inopa tarisiro yezviri mukati meiyi yekutanga update:
SIFU (Vengeance Edition) - [Playstation 5] * Parizvino hapana ongororo 49,99 EUR tenga
Kare Zvitsva muBhodhi Game Circus: Kutamba mubindu, muSweden, Japan uye mumiti yemirasi.
Inotevera Barrier-yemahara bhodhi mutambo anotsanangura mavhidhiyo: Sangano rinotangisazve chirongwa
"Gamescom: Kuvhura Husiku Hupenyu" - New show fomati naGeoff Keighley
Playstation 5: Sony inosvitsa mushandisi interface
Microsoft ndege simulator: iwo akanakisa controllers - joystick, joko kana gamepad?